Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad dib ama nuqul ka mid ah CD ama Blu-rays aad taas oo laga yaabo in aad isticmaasho software cloning. Halkan waxaan ku eegno qaar ka mid ah software 10 cloning ugu fiican ee suuqa ee maanta.
1.CD version of DVD-Cloner
Version ayaa CD ee DVD cloner waa software in ay xaqiijin doonaan in aad sameyn cabirku yahay kulan koobi file. Waxaa muuqan mideynaayo doorasho click menu xaq in aad OS daaqadaha si loo hubiyo in xawaaraha ee dayanayaan CD-aad music iyo xitaa Blu-Ray. Waxaa sidoo kale la dhexgeliyey Analyzer smart si loo hubiyo heerka nuqul guusha ay tahay waxa aad rabto in aad si sax ah Waxa aanu kaliya kuuma aan oggolaan inaad dib ilaa CD-yada, laakiin aad CD music sidoo. Dhab ahaan waa in aad soo iibsato software ka http://www.dvd-cloner.com/ at 48 $.
2.Slysoft Gadzhiyev CD
Qalabkani waxa uu yahay mushkilado marka ay timaado samaynta hayaan oo tayo leh. Waxaa si fiican ugu shaqeeyeen in dayanayaan marmarka ee CD-yada iyo CD oo dhan. Iyadoo technology Deji ugu dambeeyay, waxa saamaxaya kuwa isticmaala in ay doortaan ay gabal final la doonayo in la eego Details. Ka http://www.slysoft.com/en/purchase.html Dooro xirmo aad oo wuxuu ku raaxaysan qaababka ay awood leh.
Software CD gubi XP ayaa istaagay tijaabada waqtiga baqdin ay awoodda in ay soo saaraan natiijada. Liiskani ma noqon karo dhameystiran haddii aanan ka mid ah software la yaab leh la interface qalabka, oo aad samayn karto 1: nuqul 1 iyo dib ilaa ururinta music aad si sahlan. Waxaa jirtay in ka badan toban sano sidaas waa software lagu kalsoonaan karo si ay u isticmaalaan meel kasta oo dunida. Download software ka https://cdburnerxp.se/help/Intro/cdburnerxp lacag la'aan ah.
4.Easy CD Gadzhiyev
Tani software yar oo saamaxaya kuwa isticmaala inay Gadzhiyev CD ay isku xigxiga oo degdeg ah. Gadzhiyev oo ka shaqeeya kii saaxir ah stepwise oo sida caadiga ah waxa uu leeyahay oo ku saabsan shanta talaabo ee mid ka mid dhammayn taageero ilaa CD ah la siiyo. Version buuxda loo heli karaa download free ka http://download.cnet.com/Easy-CD-Clone/3000-2242_4-10261807.html.
Tani waa codsi wanaagsan in ay xaqiijin doonaan in aad aad music in wadid aad u adag. Its interface ma aha sida saaxiibtinimo sida laakiin waxa ay weli u shaqaysaa si fiican ee CD-music audio jeexid in qaabab kala duwan wax soo saarka. Waa freeware sidan ay u soo baxay oo isku dayaya qiimihiisu. Waxaa Fiiri on http://www.cdcopy.sk/ .Waxa waa lacag la'aan!
6.Bronze cajalid Copy
Tani waa software boosaska badan oo aan kaliya luxay CD-yada, laakiin sidoo kale ugu horayn iyaga tus fudayd. Waa in xoog decrypting ilaalinta nuqul sida ay leedahay in dhisay CSS-decrypter. On top of in, software ka saari kara ilaalinta gobolka taasoo la micno ah in aad nuqul karaa CD ka qayb kasta oo ka mid ah dunida dacaladeeda. Waxaad ka iibsan kartaa software ka http://www.bronzeburner.com/bdc/ at $19.95.
7.321Soft Gadzhiyev CD 1.20.4
Qalabkani waxa uu sameeyaa dhab ahaan waxa waxaa ku xusan in la sameeyo iyada oo aan wax badan ee loo buunbuuninayo ah. Waa ay fududahay in la isticmaalo, si degdeg ah oo uu leeyahay tayo ah wax soo saarka fiican. Iyada oo alaabta aad dib kartaa ilaa CD iyo DVD-aad oo aan wax fasaadiya ama waxyeelo u files.It waa software ah waa in ay isku dayaan in liiska. Waxaa Fiiri on http://www.321soft.com u $ 24.95 oo kaliya.
Tani alsp waa mid raqiis ah, laakiin aad u sahlan DVD cloner ah. Tani waa in ay tusinayaan in dadka isticmaala cusub waxay doonaan in ay u arkaan in ay aad u fududahay in la isticmaalo qalab xitaa marka hore. Waxaad mararka qaarkood laga yaabo inay u jaban halkaas laakiin natiijada loo baahnayn, sidaas tani waa software aad raadinayso! More si, waa lacag la'aan ah si ay isugu dayaan! Hel software buuxda u $29.95 iyada oo xiriir ah in uu yahay http://www.horizondatasys.com
Ma waxaad ku fekereyso software badan ku dhawaad ​​100 boqolkiiba hufnaan dib karaa CD-aad inkastoo? Jawaabtu waa in daboolin in soft4boast in ay ku dari doona halleeyo lillaahinimada iyo hufnaan sida ay u ogolaanaysaa in aad dib files CD aad si aad Hard Drive. Software waa arrin fudud in la isticmaalo oo aad isku dayi kartaa in muddo ah 7 maalmood ka dib, taas oo aad ka iibsan kartaa version buuxda oo ay ka goosan buuxaan download link benefits.The waa http://www.soft4boost.com/ u .Buy at $ 24.95
Tani waa mid ka mid ah ugu jaban ee liiska, laakiin weli aad wax ku ool. Waa fududahay in la rakibo iyo sida loo isticmaalo. Iyadoo interface qalabka, oo aad samayn karto 1: 1 nuqul oo dib aad ururinta CD fudayd. Waxa uu ahaa qiyaastii muddo haatan waa software lagu kalsoonaan karo si ay u isticmaalaan meel kasta oo dunida. Waxaad software muddo $ 10 iibsan kartaa ka http://www.cheetahburner.com/
> Resource > Top List > TOP 10 Best CD Cloners